Indawo: Ikhaya » Ukuthumela » Izwe | Isifunda » Rwanda » Isimemezelo Esisha Esisemthethweni sase-Rwanda ne-Wildlife Conservation Society
Isithombe sihlonishwa nguJeffrey Strain wase-Pixabay
IRwanda izoba yikomkhulu lesifunda leWildlife Conservation Society (WCS) ngemuva kokuthi uMengameli uPaul Kagame esayine isinqumo sokusungulwa kwekomkhulu layo ezweni lakhe. I-Wildlife Conservation Society yinhlangano yamazwe ngamazwe engenzi nzuzo ebhekele ukongiwa kwezilwane zasendle kanye nokuphathwa kwamapaki emhlabeni jikelele.
Umgomo we-WCS uwukulondoloza izindawo zasendle ezinkulu kunazo zonke emhlabeni ezifundeni ezingu-14 ezibalulekile eziyikhaya lamaphesenti angaphezu kwangu-50 ezinhlobonhlobo zezinto eziphilayo emhlabeni. Isimemezelo sikamongameli esigunyaza i-WCS ukuthi ibe nesihlalo eRwanda sashicilelwa ku-Official Gazette yamhla zingama-31 kuZibandlela 2021, kusho umbiko ovela eKigali.
The Inhlangano Yezokulondolozwa Kwasendle izonikezwa ilayisense yokuba nengqalasizinda eRwanda okuhlanganisa izakhiwo, umhlaba, okokusebenza, amahhovisi, amalabhorethri, nezinye izinsiza ezizosiza ekugcwaliseni izibopho zayo ngaphansi kwemibandela yesivumelwano esisayinwe yizinhlangothi zombili.
Lesi sivumelwano futhi sibeka ukuthi amathuluzi i-WCS ezowadinga emsebenzini wayo wansuku zonke azofaneleka ukukhululwa enteleni nokuthi uHulumeni waseRwanda uzokwenza kube lula nge-Visa ukuba nabasebenzi bayo bamazwe ngamazwe abasebenza eRwanda. Laba basebenzi kanye nemindeni yabo bazoba nokuvikeleka nethuba elifanayo nelabanye ezingeni lendawo yabo, kusho umbiko.
Ukuba khona kwe-WCS eRwanda kuzosiza ekuqaliseni amaphrojekthi okulondoloza izilwane zasendle kwamanye amazwe ukuze kubhekwane nemithelela yokushintsha kwesimo sezulu. Inhlangano iphinde yenze ucwaningo ngezinhlobonhlobo zezinto eziphilayo, ukongiwa kwemingcele kanye nemisebenzi yezinhlobonhlobo zezinto eziphilayo, futhi ihlonze izixazululo zezinkinga ezisongela imithombo yemvelo.
Yasungulwa ngo-1895, e-United States of America (USA), i-WCS iyinhlangano engekho ngaphansi kukahulumeni (NGO) enendlunkulu eNew York.
Umhlangano wekhabhinethi yaseRwanda wawuphasise ngoZibandlela wonyaka odlule, isicelo sokuqokwa kweNyungwe National Park njengendawo yamagugu omhlaba ye-UNESCO. Ipaki iNyungwe ibiza amaRandi ayizigidi eziyizinkulungwane ezingu-4.8 ngokwenani layo futhi yondla imifula emi-2 emikhulu emhlabeni wonke - iCongo kanye neNayile. Futhi iwumthombo okungenani wamaphesenti angu-70 amanzi ahlanzekile eRwanda.
Umklamo wokongiwa kwemvelo nokumelana nesimo sezulu obizwa ngokuthi “Ukwakha Ukuqina Kwemiphakathi Esengcupheni Yokuhlukahluka Kwesimo Sezulu e-Rwanda's Congo Nile Divide ngokusebenzisa Ihlathi Nokubuyiselwa Komhlaba” uzoqalwa endaweni yaseNyungwe National Park, Volcano National Park, kanye neGishwati-Mukura National Park.
I-Gishwati-Mukura landscape isivele yaqashelwa umhlaba wonke ngemuva kokuqokwa njengendawo yokulondoloza imvelo ye-UNESCO, kanti iVolcano National Park eyaziwa ngama-gorilla asezintabeni yaqokwa njengendawo yokulondoloza imvelo eminyakeni eminingi edlule.
Ezinye izindaba mayelana ne-Rwanda
#ukongiwa kwezilwane zasendle
Uhulumeni Kigali I-Nile Inhlangano khono eliphawulekayo Rwanda Umphakathi UNESCO I-united states Volcano Izilwane zasendle
Itheminali entsha yezimpahla eyakhiwe ngamaShayina ivulwa ngo...
I-WaterWipes Ayikwazi Ukwenza Izimangalo Mayelana Ne-Diaper Rash
UNdunankulu waseTanzania uyakungabaza ukuba nokwenzeka kweKilimanjaro...
I-Basalt Fiber Market Ukukhula Okumangalisayo, Okuningiliziwe...
Umbiko Omusha: Uhlukanisa I-Alzheimer's Early...